Dhaqdhaqaaqyada ururrada xagjirka ee Göteborg - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhaqdhaqaaqyada ururrada xagjirka ee Göteborg
La daabacay onsdag 16 mars 2016 kl 11.40
Xaaafadaha qaarood ayey welwel ku abuureen kor u kaca dhaqadhaqaaqyada ururrda xag-jirrada ee lagu magacaabo vit makt-organisationer.
Kuwaasina oo xaafadaha ka bax-san magaalooyinka waaweeeyn uga qeybiya waraaqo ey ku xayeeysiineyaan fikirradooda agagaarrada iskuulalada iyo dhallaanka, sidii ey ku soo jiidan lahaayeeen.
– Wararka na soo gaaraya ayey ka mid yihiin in xaafadaha qaarkood iyo degmooyinka derisyadaba ey ka dhacaan falal noocaasi ah oo si furan loogu tallaabsaneyo iyo sidii dhallin-yarada loogu soo jiidan lahaa, isla-markaana war-bixinno looga siin lahaa ururradas. War-bixinnadaasina oo ku wajahan dhallaanka iyo dhallin-yarada, sida uu sheegay, Zan Jankovski, ahna isku duwaha ka hor-tagga xag-jir-nimada ee magaalada Göteborg.
Magaalada Göteborg ayaa muddo waxey caan ku ahayd iney sal-dhigyo ku leeyihiin ururrada xag-jirrada midigta, halka ay dardar-gelinta hoowlahooda ee iminka ka socotaa tahay mid ka sarreeysa kolka loo barbar-dhigo waddanka intiisa kale.
Sida uu sheegay Christer Mattson, ahna maaamulaha machadka Segerstedt ee hoos yimaada jaamicadda Göteborg, isla-markaana ay howshiisu tahay ka hor-tagga ururrada xag-jirrada iyo kuwa ku taama xoogga.
Xaafaado degmada ka tirsan iyo degmooyinka jaarka nala ah ayaa laga dareemeyaa dhaq-dhaqaaqyada ururrada xag-jirka ee taabac-san in caddaanku ka sarreeyo qowmiyadaha kale. Waxaana la oran karaa iney ururradaasi wax ka badaleen istaraatiijiyadoodii, iyagoona iminka u janjeersaday howlo la xiriira bulshada.
Tusaale waxaa loo soo qaadan karaa iyada oo bartamaha magaalada Göteborg ey uga fureen iswiidhishka tabaaleey-san kushin lagu siiyo raashin, koorasyo aqoon-kororsi, fiidad la qaato tababarrada dagaalka iyo tallaabo uu ururka xag-jirka ah ee Nordiska motståndsrörelsen kaga tallaabsaday Kungälv, halkaasina oo ey ammaanka ku ilaalineyeen goob ka mid ah goobaha xiran ee lagu dabaasho.
– Hoowlahooda ayey iminka aad u dardar-geliyeen iyagoona ka faa’iideeysaneya xaaladda caalamka iyo dalkan Sweden-ba uu ku jiro ee qaxootiga faraha badan iyo sidii ey danahooda siyaasadeed ku gaari lahaayeen, sida uu sheegay Teodor Smedius, kana mid ah madaxda laamaha ciidanka ammaanka ee Kungälv - Ale.
Dhammaadka bisha maarso oo eynu ku jirno ayaa lagu tallaabsan doonaa howlo la xiriira sidii aqoon ka ballaaran nawaaxiga magaalada Göteborg looga heli lahaa ururrada xag-jirrada ee garabyada midig, una dooda caddaanka.
Maamulka degmada ayaa wada-shaqeeyn la yeelan doona kaabiyeyaal ey ka mid yihiin machadka Segerstedt iyo stiftelsen Expo, iyadoona natiijada ka soo baxda ey aasaas u noqon doonto howlaha degmadu kaga hor-tageeeyso howlaha ka hor-tagga xag-jir-nimada.
– Xaqiiqdii waa xaalada halis ah, howshayaduna waxay tahay sidii aan uga hor-tegi laheyn in dhallaanka lgau jiito beeydaha noocaasi ah noocuu doonoba xag-jir-nimadu ha ahaatee tan midig iyo midda jihaadiinta. Waaana mid laga welwelo iney xoogag noocaasi ah ka soo muuqdaan, isla-markaana dardar-geliyaan howlahooda, sida uu sheegay Zan Jankovski.